လျှပ်စစ်ဓာတ်သုံးပစ္စည်းတွေက ကလေးဦးနှောက်အပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေရှိသလဲ | Page2| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကလေး နှင့် ဦးခေါင်းပုံစံ
၂၁.၆.၂၀၁၈ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
မွေးကင်းစကလေးအများအပြားရဲ့ ဦးခေါင်းကမညီကြပါဘူး။ ဒါက စိတ်ပူဖို့လိုလား? ကလေးခေါင်းဘာကြောင့်မညီရတာလဲဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုအချိန်မှာ ကုသမှုခံယူဖို့လိုအပ်လဲဆိုတာကို နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်။
>> ဘာကြောင့် ကလေးရဲ့ဦးခေါင်းမညီမညာဖြစ်ရတာလဲ?
တစ်ခါတစ်လေမှာ ကလေးက မွေးလမ်းကြောင်း...
၂၀.၆.၂၀၁၈ | ကလေးများနှင့်ကျန်းမာရေး
ကလေးတွေ အထူးသဖြင့် ပန်းနာရင်ကြပ်၊ ဆီးချိုစတဲ့နာတာရှည်ရောဂါရှိတဲ့ကလေးတွေမှာ တုပ်ကွေးက ပြင်းထန်တဲ့ရောဂါတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
• Influenza လို့ခေါ်တဲ့ ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးနွယ်ဝင်တွေက တုပ်ကွေးဖြစ်စေပါတယ်။
• ကလေးမှာ ကိုယ်ပူ၊ ခေါင်းကိုက်၊ ကြွက်သားတွေနာကျင်ခြင်းစတဲ့...